Adrenaline Hydrochloride jekiseni - China Ningbo Second Uwandu hwemakemikari
Adrenaline Hydrochloride jekiseni
Adrenaline Hydrochloride jekiseni [Description] chigadzirwa uyu Hauoneki kana zvinenge Hauoneki zvakajeka zvokunwa. [Rinoshanda uye Use] chigadzirwa ichi ane simba mugumisiro α Kanotokonya uye β Kanotokonya. α Kanotokonya activation kungaita kuti marwadzo ganda, mucosa uye mudziyo visceral; β Kanotokonya activation kungaita kuti angiectasis pamusoro coronary tsinga, nokufarisa skeletal tsandanyama uye cardiac tsandanyama, kuwedzera kwemwoyo uye kutandara pamusoro anotsvedzerera tsandanyama ose bronchus uye gastrointestinal tra ...
chigadzirwa Izvi Hauoneki kana zvinenge Hauoneki zvakajeka zvokunwa.
[Rinoshanda uye Use]
chigadzirwa ichi zvichikanganisa simba mugumisiro α Kanotokonya uye β Kanotokonya. α Kanotokonya activation kungaita kuti marwadzo ganda, mucosa uye mudziyo visceral; β Kanotokonya activation kungaita kuti angiectasis pamusoro coronary tsinga, nokufarisa skeletal tsandanyama uye cardiac tsandanyama, kuwedzera kwemwoyo uye kutandara pamusoro anotsvedzerera tsandanyama ose bronchus nemudumbu. simba rayo riri BP Rinobatanidzwa ayo chipimo chemushonga, ayo kwakajairika chipimo chemushonga anogona systolic vachimanikidzwa kuenda pasina anorashisa diastolic vachimanikidzwa kuenda kana zvichiita kuti aende pasi zvishoma; ayo chipimo chemushonga guru kunogona kukonzera zvose systolic kumanikidzwa uye diastolic vachimanikidzwa kuenda. Zvinonzi ainyanya kushandiswa vabatsirwe yokutanga angoerekana cardiac kusungwa uye nokuda pakuyamura chiratidzo chakakomba anaphylaxis chirwere, rinogona kushandiswa urticaria, serum kurwara uye angioneurotic edema uye Árbol asima uye zvichingodaro, zviri kazhinji ikashandiswa pamwe vemo dzokutindivadza kureba ya vomunharaunda yokutindivadza.
Subcutaneous jekiseni: mumwe chete dose, 2-5ml kuti bhiza uye zvipfuwo; 0.2-1.0ml makwai uye renguruve; 0.1-0.5ml nokuti imbwa.
Intravenous jekiseni: mumwe chete dose, 1-3ml kuti bhiza uye zvipfuwo; 0.2-0.6ml makwai uye renguruve; 0.1-0.3ml nokuti imbwa.
[ Kwakaomarara R eaction ]
chigadzirwa ichi anogona kunyengedza kufara, chinovanetsa, dedera, mumarutsi, BP (pamusoro dose), arrhythmia uye zvichingodaro. Akadzokorora jekiseni izvozvo kungaita kuti omunharaunda necrosis.
Ventricular fibrillation zvinogona kukonzerwa kana chigadzirwa iyi ikashandiswa pamwe vakawanda dzokutindivadza akadai chloral hydrate. Hazvina kubvumirwa kuti mushandirapamwe kushandiswa Digitalis uye calcium yakawanda somushonga kugadzirira kana.
Zvinofanira kushandiswa nokungwaririra kuti makemikari mwoyo chirwere, hyperthyroidism, zvinorwadza uye Hemorrhagic kuvhunduka uye zvichingodaro.
3. chigadzirwa ichi haafaniri kushandiswa kana kushanduka ruvara.
Zvinofanira kudziviswa kuti vachibatwa chiedza uye zvikachenge- airtight ezvinhu pamumvuri (pazasi 20 ℃)
Next: Ceftiofur Sodium nokuti jekiseni
Andrenaline Hydrochloride jekiseni
Dexamethasone Sodium Phosphate jekiseni
Ceftiofur Sodium nokuti jekiseni
Pregnant Mare Serum Gonadotropin kuti jekiseni ...
Viatamin AD nokuti jekiseni